Ozil oo ka warbixiyay go’aankiisa kama dambeysta ah ee kaga aadan inuu sii joogayo Arsenal iyo inkale – Gool FM
Ozil oo ka warbixiyay go’aankiisa kama dambeysta ah ee kaga aadan inuu sii joogayo Arsenal iyo inkale
(England) 10 Agoosto 2019. Xiddiga reer Germany ee Mesut Ozil ayaa ka warbixiyay go’aankiisa kama dambeysta ah inuu sii joogayo kooxda Arsenal iyo inkale xilli ciyaareedka soo socda, sida ay ku waramayaan wargeysyada.
Ozil ayaa wali ku adkeysanaya inuu sii joogayo kooxdiisa Gunners, inkastoo ay jiraan warar la xiriirinaya inuu ku sii jeedo horyaalka MLS ee dalka Mareykanka.
Maalmihii la soo dhaafay, Arsenal waxaa u furneyd fikradda ah iibinta Ozil inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga, si looga takhaluso mushaharka qaaliga ah uu kooxda ka qaato, isaga oo isbuucii mushaar ahaan u qaata £ 350,000.
Wali waxaa jirta fursad lagu iibin karo Mesut Ozil madaama suuqa kala iibsigu uusan ka xirmin dalal dhowr ah, inkastoo kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League aysan lasoo saxiixan karin ciyaartooy cusub.
Wargeyska “Washington Post” ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu tilmaamay in kooxda DC United ay raadineyso saxiixa Mesut Ozil, kaasoo ay doonayaan inuu u noqdo bedelka Wayne Rooney oo ku biiray Derby County maalmo ka hor.
Dhinaca kale shabakada “Goal” ayaa daaha ka qaaday in Mesut Ozil uu doonayo inuu la sii joogo kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal, isla markaana uusan dooneynin inuu ka tago xilligan ama bilowga sanadka cusub.